အမေရိက | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 172
အိမ်ပြန်မရောက်သေးတဲ့ အတွေးများဟေမန်သဇင်စက်တင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈ (ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) စိတ်ဆိုတာ အဆန်းသား။ တွေးမိတွေးရာ တောင်စဉ်ရေမရ တွေးမိတတ်ရဲ့။ တခါတလေ စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ တယ်မကပ်ဘဲ တွေးမိတွေးရာ တွေးတတ်လွန်းလို့ “တွေးစမ်းဟယ်”လို့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ တွေးခိုင်းလိုက်မိပေါ့။ အဲဒီအခါကျတော့လည်း ဘာတွေးရမှန်းမသိ ဖြစ်ရပြန်ရော။ ဒါနဲ့ပဲ ငေးမိငေးရာ ငေးကြည့်မိတော့ အိမ်ပြတင်းပေါက်ကတဆင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးကို ငေးမိပြန်ရော။ သမုဒ္ဒရာကြီးထဲ နေလုံးကြီး ဆင်းဝင်သွားတဲ့ ဆည်းဆာကို ကြည့်ရင်း အဖွားကို သတိရလိုက်မိပြန်တယ်။ တချိန်တုန်းက အဖွားဟာလည်း နေ၀င်ဖျိုးဖျ ဆည်းဆာချိန်တိုင်းမှာ သူ့အချစ်ဆုံးမြေးမကြီးကို မျှော်ခဲ့ရဖူးတာကိုး။ ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းက အမေက အလုပ်လုပ်တယ်။ ရုံးမသွားခင် ချက်ပြုတ်ထားပေးခဲ့တဲ့အပြင် ကျမတို့ဝတ်မယ့် အ၀တ်အစားတွေကအစ ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်။ အမေရုံးသွားပြီဆို ကျမတို့ညီအစ်မနဲ့ အဖွားပဲ ကျန်ခဲ့တာ။ အဖွားက ကျမတို့ညီအစ်မကို...
ကာတွန်းမောင်ရစ် – ရဲဘော်တို့ … သင်သွားလိုရာသို့ သွားနိုင်ပြီ မေ ၂၂၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Saw Ngo – Change we can believe in (is it?)
ကာတွန်း စောငို – ပြင်လို့ရပါတယ် (ဟဲဟဲ) မေ ၂၂၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Saw Ngo – Burmese President to behave …
ကာတွန်းစောငို – သမ္မတကြီး လိမ္မာတော့မယ် တဲ့လား မေ ၂၁၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Aung Din – Regime’s Parliament in Perspective (21)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၄၅၊ မေလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၃၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၂၁) အောင်ဒင်၊ မေ ၂၁၊ ၂၀၁၃ အပိုင်း (၂၁) လွှတ်တော်နှင့် မတရားသောဥပဒေများ ဖျက်သိမ်းရေး (က) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှ၊ တရားဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ မည်သူမှမရှိမှ၊ အဂတိလိုက်စားမှုကင်းမဲ့ပြီး လွတ်လပ်မျှတပွင့်လင်းသော တရားစီရင်ရေးစနစ်ရှိမှ နိုင်ငံတစ်ခုဟာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်၊ တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှပဲ စီးပွါးရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာပါ၊ “တရားဥပဒေ” ဆိုရာမှာလဲ “ဥပဒေ” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို “တရား” ဆိုတာနဲ့ အထူးပြုထားတဲ့အတိုင်း တရားမျှတတဲ့ ဥပဒေတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်၊ “ဥပဒေ” ဆိုတာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊...
ဒ ဂု န် တာရာေ နွ ဦး( ၂ ) အောင်ဝေး မေ ၂၀၊ ၂၀၁၃ ဆောင်းခိုငှက်က မြောက်အိပ်မက်ဆီ ပြန်ခဲ့ပြီ။ ပန်းကြာဝတ်မှုန် အရုဏ်ရိုးမ “တောင်ဥက္ကလာဟိုးမား” မှာ တစ်မိုးသောက်ပါပြီလား။ မပြန်ခင်နှုတ်ဆက် “သန်လျင်ဂရက်” လေ နွေရက်တွင် သာမိုင်းခမ်းသို့ ဆုတ်ခွာခြင်း။ ခေမာရဋ္ဌ ည တစ်ည လ၀န်းထဲ ၀ပ်နေတဲ့ယုန်ကလေး ဘယ်ထွက်ပြေးသလဲ။ ဆန်ဖွပ်တဲ့အဘိုးအို မျက်ရည်စို ဘာ့ကြောင့်ငိုသလဲ။ “စစ်ဟာ ကျောင်းတော်ကြီးပဲ” ...
ကလီး ဂါးဗမားမင်း၏ ခရီးစဉ် ကာတွန်း – စောငုို မေ ၁၉ ၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Cartoon Maung Yit – Welcome Myanmar to USA, General Thein Sein …
ကာတွန်းမောင်ရစ် – “ကိုကို ကျမကို ချာတိတ်လို့ မခေါ်နဲ့၊ နာမည်ရှိတယ် မကြိုက်ဘူး၊ သိရဲ့လား” (မေခလာ)၊ မေ ၁၆၊ ၂၀၁၃ (သမ္မတ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်ကို အမေရိကန်မှ ကြိုဆိုတဲ့ ကာတွန်းဂျီး) No tags for this post. Related posts No related posts.
ပွင့်ဖြူနန္ဒာ – အမေနေ့ အမှတ်တရလက်ဆောင် မေ ၁၂၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၄၄၊ မေလ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၃၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့်(၂၀)အောင်ဒင်၊ မေ ၁၃၊ ၂၀၁၃အပိုင်း (၂၀) လွှတ်တော်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အမိန့်နဲ့ အကျဉ်းသူအကျဉ်းသား ၉၃ ယောက်ကို အကျဉ်းထောင်များကနေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်၊ အဲဒီ ၉၃ ယောက်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅၉ ယောက်ပါဝင်တယ်လို့လဲ သိရပါတယ်၊ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (နိုင်/ကျဉ်း) များအတွက် ဝမ်းသာကြည်နူးရပြီး ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်/ကျဉ်းများလဲ အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ကြဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွါးအတွက် နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားကြသူများ...
Page 172 of 201«1...170171172173174...201»